Ì Chetara?​—⁠Disemba 2016
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Disemba 2016
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mongolian Moore Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Ì wetuola obi gụọ Ụlọ Nche ndị ọhụrụ e bipụtara? Legodị ma ị̀ ga-azali ajụjụ ndị a:
Olee ụdị mmehie Jizọs na-ekwu banyere ya na ndụmọdụ e dere na Matiu 18:15-17?
Jizọs na-ekwu banyere ụdị mmehie mmadụ abụọ nwere ike ikwurịta ma dozie. Ma, ọ bụ mmehie dị́ oké njọ nke na o nwere ike ime ka a chụọ mmadụ n’ọgbakọ ma ọ bụrụ na e dozilighị ya. Dị ka ihe atụ, o nwere ike ịbụ nkwutọ, ma ọ bụ igwu wayo.—w16.05, peeji nke 7.
Gịnị ka ị ga-eme ka ịgụ Baịbụl bakwuoro gị uru?
I nwere ike ime ihe ndị a: Buru n’obi na e nwere ihe ị ga-amụta, gbaakwa mbọ ka ị mụta ihe n’ebe ị na-agụ; jụọ onwe gị, sị, ‘Olee otú m ga-esi jiri ya nyere ndị ọzọ aka?’; jirikwa akwụkwọ ndị e ji eme nchọnchọ mee nchọnchọ n’ihe ị na-agụ.—w16.05, peeji nke 24-26.
Ọ̀ dị njọ ma Onye Kraịst ruwe uju n’agbanyeghị na o kweere ná mbilite n’ọnwụ?
Ikwere ná mbilite n’ọnwụ apụtaghị na Onye Kraịst agaghị eru uju ma mmadụ nwụnahụ ya. Ebreham ruru uju mgbe nwunye ya Sera nwụrụ. (Jen. 23:2) Onye Kraịst na-eru uju ga-eji nwayọọ nwayọọ nwetawa onwe ya.—wp16.3, peeji nke 4.
N’ọhụụ Ezikiel, ole ndị ka nwoke ahụ jí mpi ink odeakwụkwọ na ndị ikom isii ahụ jí ngwá ọgụ e ji akụgbu mmadụ nọchiri anya ha?
Anyị ghọtara na ha nọchiri anya ndị mmụọ ozi duziri mbibi e bibiri Jeruselem, ndị ga-ebibikwa ụwa Setan a n’Amagedọn. N’oge anyị a, nwoke ahụ jí mpi ink odeakwụkwọ nọchiri anya Jizọs Kraịst, bụ́ onye na-aka ndị a ga-echebe akara.—w16.06, peeji nke 16-17.
Olee nsogbu ndị na-emelighị ka Baịbụl ghara ịdịgide?
Baịbụl dịgidere n’agbanyeghị (1) na ihe ndị mbụ e ji dee ya bụ ihe ndị nwere ike irekasị erekasị, dị ka papaịrọs na akpụkpọ anụ; (2) mbọ ndị ọchịchị na ndị isi okpukpe gbara ịla ya n’iyi; (3) mbọ ụfọdụ ndị gbara ịgbanwe ihe e dere na ya.—wp16.4, peeji nke 4-7.
Olee otú ị ga-esi selata aka n’ihe ndị na-eri gị oge?
Mata ihe ndị dị́ gị mkpa, kwụsị imefusị ego n’ihe ndị na-adịghị gị mkpa. Depụta otú ị ga-esi na-emefu ego. Wepụsịa ihe ndị a na-enweghị ihe i ji ha eme. Kwụchaa ụgwọ niile i ji. Belata oge i ji arụ ọrụ ego, haziekwa otú ị ga-esi jekwuoro Jehova ozi.—w16.07, peeji nke 10.
Gịnị ka Baịbụl kwuru na ọ bara uru karịa ọlaedo ma ọ bụ ọlaọcha?
Ihe Job 28:12, 15 kwuru gosiri na amamihe Chineke bara uru karịa ọlaedo ma ọ bụ ọlaọcha. Ka ị na-achọ ya, gbalịsie ike ka ị dịrị umeala n’obi, ka okwukwe gị siekwa ike.—w16.08, peeji nke 18-19.
Ụmụnna nwoke hà kwesịrị ịna-eruwe afụ ọnụ taa?
N’obodo ụfọdụ, mmadụ nwere ike ịhapụ afụ ọnụ ya, mezie ya ka ọ dị mma n’anya. Ọ gaghịkwa eme ka ndị mmadụ ghara ige ntị n’ozi ọma. Ma, ụfọdụ ụmụnna nwere ike ikpebi na ha ga na-akpụ nke ha. (1 Kọr. 8:9) N’obodo ụfọdụ, a naghị ewere ya na ndị ozi Chineke kwesịrị ịhapụ afụ ọnụ ha ka o rujuo erujuo.—w16.09, peeji nke 21.
Gịnị mere anyị ga-eji kwere na akụkọ Baịbụl kọrọ gbasara Devid na Golayat mere eme?
Golayat ji ihe dị ka sentimita iri na ise ka nwoke a na-ahụbeghị onye ka ya ogologo n’oge anyị a. Ndị na-amụ banyere ihe ndị mgbe ochie hụrụ ebe e dere ụlọ Devid n’otu ihe e dere n’oge ochie. Ihe a ha chọpụtara na ihe Jizọs kwuru gosiri na e nwere onye bụ́ Devid. Ebe ndị Baịbụl kwuru Devid na Golayat nọ lụọ agha ahụ ka dị ugbu a.—wp16.5, peeji nke 13.
Olee otú inwe amamihe si dị iche n’ịmụta ihe na inwe nghọta?
Mmadụ nwere ike ịmụta ihe a kụziiri ya ma buru ya n’isi. Onye nwere nghọta na-amata otú otu ihe si gbasa ihe ọzọ. Ma onye nwere amamihe na-eji ihe ọ mụtara na ihe ọ ghọtara mee ihe ga-abara ya uru.—w16.10, peeji nke 18.
AKỤKỌ NDỤ Aghọrọ M “Ihe Niile n’Ebe Ụdị Mmadụ Niile Nọ”
Chineke Mere Ka Unu Si ná Mmehie Pụọ n’Ihi Obiọma Ya Na-erughịrị Mmadụ
“Ịtụkwasị Uche na Mmụọ Nsọ Pụtara Ndụ na Udo”
Na-atụkwasị Jehova Nchegbu Gị Niile
Jehova Na-akwụ Ndị Na-achọsi Ya Ike Ụgwọ Ọrụ
Ịdị Nwayọọ n’Obi Ga-egosi na Ị Ma Ihe
Isiokwu Ndị E Bipụtara n’Ụlọ Nche n’Afọ 2016
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Disemba 2016
Ì Chetara?—Disemba 2015
Ì Chetara?​—⁠Jun 2016